စစ်တွေမြို့ခံတစ်ဦးဆီမှ ရရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်နောက်ဆုံးသတင်း ~ Myanmar Express
စစ်တွေမြို့ခံတစ်ဦးဆီမှ ရရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်နောက်ဆုံးသတင်း
From : မျိုးချစ်
သော်လည်း ကုလားများ နောက်မဆုတ်သဖြင့် လူအုပ်ထဲသို့ပစ်ပြီဖြစ်ကြောင်းကို မင်းဂံရွာသားတစ်ဦးမှာ သတင်းပေးပို့သည်“ ကုလားတွေက ချီတက်လာတာအများကြိး၊ ကျွန်တော့်အထင် ထောင်ဂဏန်းနီးပါးလောက်ရှိမယ်။ သူတို့ကို မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ပြီးခြောက်လှန့်တာမဆုတ်ဘူး၊ အခုတော့ လူအုတ်ကိုပဲ တည့်တည့်ပဲ ပစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ အခုထက်ထိ ပစ်ခတ်နေကြောင်းသိရှိရသည်။
10 June 2012 02:01
ညှာပြီးမပစ်တာကို စောက်ကုလားတွေ ခွေးပါးဝတယ်။ အခုတေ့ာသေကုန်ကြပြီ တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်။ ကုလားများဘက်က ဘာပြောဉီးမလဲ ဒေါ်စု။ ကြက်ကုလားမြအေးရေ ဒီစောက်ကုလားတွေ ရှင်းပြီးရင် သားကို အလာဆီပို့ပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား။ မြန်မာပြည်မှရှိကြတဲ့ ကုလားစုတ်တွေ အားလုံးသေရမယ်။
10 June 2012 05:24
10 June 2012 07:25
Army... Please please. ..shot them...why are you still away from this affair????...not enough only polices......please please please. ..shot them like as 8888...
10 June 2012 08:13
ငါတို့ ရန်ကုန်မှာ ဆူလေ ဘုရား အနီးတ၀ိုက်က ကုလားတွေကိုလဲ အမြန်ဆုံး ၇ှင်းပစ်၇မယ်..
10 June 2012 08:51
10 June 2012 13:55
အ မေ စု။ ဘာ လို့ ကု လား ကို ဒီ လောက် ကာ ဘာ လုပ် ပေးနေ ရ တာ လဲ။ နိုင် ငံ ခြား သား နဲ့ ပတ် သက် ရင် ခင် ဗျား က နိုင် ငံ ခြား သား ဘက် က ဘဲ။ မူ ဆ လင် ဘက် က ဘာ လို့ ရောက် နေ တာ လဲ။ တိုင်း ပြည် အေး ချမ်း သာ ရာ ရေး အ တွက် လို့ တော့ မ ပြော နဲ့ နော်။ ဖ ယောင်း တိုင် ကိ စ စ တုံး က ခင် ဗျား ဘဲ လမ်း ပေါ် ထွက် ခိုင်း ခဲ့ တာ ဘဲ။ တည် ငြိမ် နေ တဲ့ တိုင်း ပြည် ကို ဆူ ဆူ ပူ ပူ ဖြစ် အောင် မြန် မာ ချင်း ကြ တော့ ရှို့ တယ်။ နိုင် ငံ ခြား သား နဲ့ ကြ တော့ မူ ဆ လင် ဘက် လိုက် တယ်။ မူ ဆ လင် မဲ လို ချင် လို့ လား။အ မေ စု မြန် မာ ဆို ရင် ကျွန် တော် တို့ ရ ခိုင် တွေ နဲ့ မြန် မာ တွေ အ တွက် တစ် ခု ခု လုပ် ပေး ပါ ---။
အမေစုက တကယ်ပဲ မူဆလင်ဖက်က cover ပေးနေတာလား..ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ...မူဆလင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မလို့လား
တိုးတက်တော့မယ်နိုင်ငံတော် သစ်ဆီသွားချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်လို့ အမေစိတ်မကောင်းဘူးသားတို့ရေ...အဓိကရုန်းတစ်ခုမဖြစ်စေလိုတာအမေဆန္ဒပါ။ အားလုံးကိုငြိမ်းအေးစေလိုပါတယ်။ ၁လှေတည်းစီတွေဆိုတော့ အမေက ကိုကုလားကိုနှစ်သိမ်လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ အမေသိပါတယ်။ အမေက ကိုကုလားကို မသိသာလေ မုန့်ဆိပ်နှုတ်လိုက်တယ်သား။ကဲ ကျေနပ်လိုက်။ အခွင့်ရရင် ထက်နှုတ်မယ်။
13 June 2012 04:01
Very good. Myanmar police and army in Rakhine state , Myanmar must lesson these illegal Bangladesh muslim army, terrorists , rebels and Separatists and shoot and kill them on sight. All Rakhine people , Myanmar army, police in Rakhine state , Myanmar government , NLD must unite and resistance war against these Bangladesh muslim rohingya army , separatists , terrorists , rebels . All Rakhine people must protest Aung San Su Kyi that she didn't dare to talk that Rohingya is not Myanmar ethnicity and she didn't visit to Rakhine Refugees and support them.
10 August 2012 18:08
နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြသလို တစ်ကယ်လုပ်ပြစ်လိုက်ကြပါ။ ဒါမှမျိုးပြုတ်သွားမှာ။
ကုလားတွေ ကို သတ်ပစ်
25 October 2012 20:00
လူကိုတန်ဖိုးထားပါ လူသားအချင်းချင်းစာနာပါ အမြန်ဆုံးငြိမ်ချမ်းပါစေ